Mortal Engines 2018 – Myanmar Subtitles
Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer Trailer
Genre: Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi, Thriller Director: Christian Rivers Actors: Hera Hilmar, Hugo Weaving, Jihae, Robert Sheehan Country: New Zealand, USA Released: 14 Dec 2018 Score: 6.1 Duration: 128 min Quality: 720p Years: 2018 View: 531
အတျောမြားမြား အောငျမွငျကွတာရှိသလို စုတျပွတျသပျနအေောငျ ဝဖေနျခံရတာတှလေဲ ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ ဒီကားကတော့ ဝတ်တုဖတျထားတဲ့
ပရိသတျတှအေတှကျ အဆငျပွသေလို ရှိပမေယျ့ ဝတ်တုဖတျမထားတဲ့သူတှအေတှကျကြ Intro သခြောပွမသှားတော့ ရှာနညျးနညျးလညျဖို့ရှိတယျ။ မကွညျ့ခငျ နားလညျအောငျ ဇာတျလမျးကြောရိုးကို
ကြှနျတျော အတတျနိုငျဆုံးလေး ရှငျးပွလိကျပါတယျ။
အခြိနျက ၃၅ ရာစု ကြှနျတျောတို့တှေ သိထားတဲ့ ကမ်ဘာကွီးက အရငျလိုမဟုတျတော့ဘူး မွအေနအေထားကအစ ကှဲပွားခွားနားသှားပွီ အဲ့လိုဖွဈသှားရတာကလဲ ရှေးခတျေလူသားတှလေို့ သူတို့ ချေါကွတဲ့ ကြှနျတျောတို့ အခု လကျရှိခတျေက လူတှရေဲ့ ဆကျဆော့မှုကွောငျ့ဖွဈလာတဲ့ ကမ်ဘာစဈကွီးကွောငျ့ပဲ။ အဲ့ဒီစဈကွီးရဲ့ ကွာမွငျ့ခြိနျက ခွောကျမိနဈတညျးပါ ထို ခွောကျမိနဈတညျးနဲ့ ကမ်ဘာတဈခုလုံး ရစရာမရှိဖွဈသှားခဲ့ရတယျ။ အပုနျးကောငျးလို့ အသကျရှငျကနျြရဈတဲ့ လူတှကေလှဲရငျ ကမ်ဘာပျေါမှာ စားစရာရယျလို့ ဘာမှမကိုမကနျြတော့ဘူး သီးနှံလဲစိုကျမရ တိရိစ်ဆာနျဆိုတာလဲမရှိ ဂဟေစနဈတဈခုလုံး ပကျြစီးသှားတော့တယျ။ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ကတော့ ကမ်ဘာမွပေျေါမှာ တဈနရောတညျး ကွာကွာနလေို့မရတော့လောကျအောငျ ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲက မွနျကုနျတော့တာပဲ အဲ့လိုနဲ့ပဲ အနောကျတိုငျးမှာ ဧရာမအငျဂငျြကွီးတှတေပျထားတဲ့ ရှလြေ့ားမွို့တှေ စတငျပျေါပေါကျလာခဲ့တော့တာပဲ။ ရှလြေ့ားမွို့ကွီးတှဟော အငျအားနညျးတဲ့မွို့တှကေို လိုကျလံ အမဲလိုကျ ဝါးမွိုကွပွီး မွို့ငယျတှကေလဲ ကိုယျနိုငျရာ ရှာငယျလေးတှကေို အမဲလိုကျကွပါတယျ။ အဲ့လိုနဲ့ တဖွညျးဖွညျး အမဲလိုကျပှဲတှေ ကငျြးပလာလိုကျတာ အနောကျတိုငျးတငျမက ဥရောပမှာပါ အမဲလိုကျစရာနရောမရှိတော့တဲ့အထိပါပဲ။ ထို အမဲလိုကျမွို့ကွီးထဲမှာ လနျဒနျမွို့ဟာ အလှနျအငျအားကွီးထှားပါတယျ ။ အရှတေို့ငျးကတော့ ဆနျ့ကငျြဘကျပါ အမဲလိုကျတာတှဘောတှမေလုပျပဲ စုစညျးမှု နဲ့ အတညျတကရြပျတညျပါတယျ အနောကျတိုငျးမွို့တှေ ရနျကို ကာကှယျဖို့ မဟာတံတိုငျးကွီး ဆောကျထားတဲ့အပွငျ အငျမတနျစှမျးရညျထကျတဲ့ လတေပျကိုလဲ ပိုငျဆိုငျထားပါသေးတယျ။ အနောကျတိုငျးက မွို့တှေ ဟာ အရှတေို့ငျးကို မကွာခန သိမျးယူဖို့ ကွိုးစားကွပမေယျ့ အရှတေို့ငျးရဲ့ မဟာခံစဈကွောငျ့ ပွနျပွေးခြိနျတောငျမရပဲ မသာပျေါကုနျကွတာခညျြးပါပဲ။
ကဲ ဒီလောကျသိထားရငျ အေးဆေးကွညျ့လို့ရပါပွီ။
ဘာသာပွနျနဲ့ အညှနျး – Myo Khant
အတော်များများ အောင်မြင်ကြတာရှိသလို စုတ်ပြတ်သပ်နေအောင် ဝေဖန်ခံရတာတွေလဲ ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ ဒီကားကတော့ ဝတ္တုဖတ်ထားတဲ့
ပရိသတ်တွေအတွက် အဆင်ပြေသလို ရှိပေမယ့် ဝတ္တုဖတ်မထားတဲ့သူတွေအတွက်ကျ Intro သေချာပြမသွားတော့ ရွာနည်းနည်းလည်ဖို့ရှိတယ်။ မကြည့်ခင် နားလည်အောင် ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကို
ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံးလေး ရှင်းပြလိက်ပါတယ်။
အချိန်က ၃၅ ရာစု ကျွန်တော်တို့တွေ သိထားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး မြေအနေအထားကအစ ကွဲပြားခြားနားသွားပြီ အဲ့လိုဖြစ်သွားရတာကလဲ ရှေးခေတ်လူသားတွေလို့ သူတို့ ခေါ်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အခု လက်ရှိခေတ်က လူတွေရဲ့ ဆက်ဆော့မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့်ပဲ။ အဲ့ဒီစစ်ကြီးရဲ့ ကြာမြင့်ချိန်က ခြောက်မိနစ်တည်းပါ ထို ခြောက်မိနစ်တည်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ရစရာမရှိဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ အပုန်းကောင်းလို့ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ လူတွေကလွဲရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ စားစရာရယ်လို့ ဘာမှမကိုမကျန်တော့ဘူး သီးနှံလဲစိုက်မရ တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာလဲမရှိ ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတော့တယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ တစ်နေရာတည်း ကြာကြာနေလို့မရတော့လောက်အောင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲက မြန်ကုန်တော့တာပဲ အဲ့လိုနဲ့ပဲ အနောက်တိုင်းမှာ ဧရာမအင်ဂျင်ကြီးတွေတပ်ထားတဲ့ ရွေ့လျားမြို့တွေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော့တာပဲ။ ရွေ့လျားမြို့ကြီးတွေဟာ အင်အားနည်းတဲ့မြို့တွေကို လိုက်လံ အမဲလိုက် ဝါးမြိုကြပြီး မြို့ငယ်တွေကလဲ ကိုယ်နိုင်ရာ ရွာငယ်လေးတွေကို အမဲလိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အမဲလိုက်ပွဲတွေ ကျင်းပလာလိုက်တာ အနောက်တိုင်းတင်မက ဥရောပမှာပါ အမဲလိုက်စရာနေရာမရှိတော့တဲ့အထိပါပဲ။ ထို အမဲလိုက်မြို့ကြီးထဲမှာ လန်ဒန်မြို့ဟာ အလွန်အင်အားကြီးထွားပါတယ် ။ အရှေ့တိုင်းကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ အမဲလိုက်တာတွေဘာတွေမလုပ်ပဲ စုစည်းမှု နဲ့ အတည်တကျရပ်တည်ပါတယ် အနောက်တိုင်းမြို့တွေ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ မဟာတံတိုင်းကြီး ဆောက်ထားတဲ့အပြင် အင်မတန်စွမ်းရည်ထက်တဲ့ လေတပ်ကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ အနောက်တိုင်းက မြို့တွေ ဟာ အရှေ့တိုင်းကို မကြာခန သိမ်းယူဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် အရှေ့တိုင်းရဲ့ မဟာခံစစ်ကြောင့် ပြန်ပြေးချိန်တောင်မရပဲ မသာပေါ်ကုန်ကြတာချည်းပါပဲ။
ကဲ ဒီလောက်သိထားရင် အေးဆေးကြည့်လို့ရပါပြီ။
ဘာသာပြန်နဲ့ အညွှန်း – Myo Khant
#Mortal Engines 2018 #Download Mortal Engines 2018 Full Movie #Free Mortal Engines 2018 Download
4 responses to “Mortal Engines 2018”
219524 940443Hi, Thanks for your page. I discovered your page by means of Bing and hope you maintain providing far more excellent articles. 17040
943315 713633Absolutely pent topic matter, regards for entropy. 804587
457069 362703So, is this just for men, just for females, or is it for both sexes If it s not, then do girls want to do anything different to put on muscle 818996
935455 184128Some truly wonderful articles on this internet site , appreciate it for contribution. 507938